Nagu saabsan - Tanrimine Metal Support Co., Ltd.
Waxaan nahay soo saaraha ugu weyn
iyo alaab -qeybiyeyaasha alaabada la dejiyay ee Shiinaha
Tanrimine Metal Support Co., Ltd (TRM) waa soo -saare xirfadle u ah SPLIT SET PRODUCTS (Frittion bolt iyo saxan) oo leh noocyo badan oo kaabis ah iyo qaybo qaraabo ah.
Iyada oo ah soo-saaraha ugu weyn iyo alaab-qeybiyeyaasha alaabada la dejiyay ee Shiinaha, waxaan leenahay in ka badan 10,000 tan oo awood ah oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee suunka iyo saxanka, dhanka kale annaga oo leh duub-rogayaasha horumarsan iyo PLC-Welders waxaan bixin karnaa alaab tayo sare leh si aan ula kulmo shuruudaha macaamiisha darajada ugu sarreysa ku leh arimahan dalal kala duwan oo adduunka ah.
Nidaamkayaga maaraynta tayada waxaa ka go'an geedi socod joogto ah oo lagu hagaajinayo tayada iyadoo awood loo siinayo dhammaan shaqaalaha inay qaataan mas'uuliyadda tayada shaqadooda iyaga oo u maraya tababar gudaha iyo dibaddaba, Shaqaale kasta wuxuu mas'uul ka yahay tayada badeecada/adeegga, ee ku habboon hawsha la qabanayo. Hirgelinta iyo fulinta Nidaamka Maareynta Tayada (QMS) iyo habraacyadu waa mas'uuliyadda tooska ah ee maamulka fulinta shirkadda.
Kormeerka Maalinlaha ah
Wakiilka maamulka (Maareeyaha Tayada) ayaa mas'uul ka ah la socodka waxqabadyada QMS ee maalinlaha ah sida lagu qeexay Buugga Tayada (u hoggaansan shuruudaha la cayimay ee GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008) iyo u hoggaansanaanta hannaanka iyo habraacyada la xiriira waxqabadka tayada badeecada/adeegga oo lagu qiyaaso Hantidhawrka Gudaha iyo hababka xakamaynta ee hadda jira.
Tiknoolajiyadeena iyo waaya -aragnimadeena ayaa noo saamaxaysa inaan si dhaqso leh u soo saarno qalab qiimo jaban, taas oo keenta wareegyo wax -soo -saar oo gaagaaban. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaan awoodnaa inaan si joogto ah u qabanno dulqaadasho aad u adag, annagoo adeegsanayna teknolojiyadda wax -soo -saarkii ugu dambeeyay si aan u soo saarno alaabo tayo leh.
Marka lagu daro injineernimadeena sida loo ogaado, waxaan ka caawineynaa macaamiisha inay xalliyaan mashaakilkooda, iyagoo fikraddooda iyo baahiyaha injineernimada ka dhigaya kuwo dhab ah, siiyaan xal ka wanaagsan, ka sii hal abuur badan, hoos u dhigaya qiimaha, yaraynta waqtiga-gaarsiinta iyo sii wanaajinta badeecadaha dhammaaday ee tayada leh.
Iyada oo leh astaan ​​u gaar ah, waxaan ku mashquulnay tayada alaabtayada oo aan ka dhigno tayada bartilmaameedka kowaad dhammaan soosaarka. Waxaan diiradda saareynaa macaamiisheena oo sharraxaya shuruudaha laga soo bilaabo xiriirkii ugu horreeyay illaa shixnaddii ugu dambeysay, taas oo keentay in hab -socod kasta uu bilow ilaa dhammaad ku socdo si aad u adag ula socodka nidaamkayaga xakamaynta tayada laba -geesoodka ah.
Waxaa naga go'an dhimista hagaajinta joogtada ah ee qashinka iyo dib -u -noqoshada deg -degga ah si aan si joogto ah macaamiishayada ugu siino badeecadaha kama dambaysta ah oo leh tayo aad u wanaagsan oo dhammaystiran, oo waqtigeedii lagu bixiyo qiimaha ugu fiican.
Nabadgelyadu had iyo jeer waa Hawlgalkayaga Darajada Sare ee badeecadaheena iyo geeddi -socodkeenna, sidoo kale waa furaha lagu gaadho ujeeddadayada. Ballan -qaadkeenna xagga tayada ayaa ah kan ugu muhimsan nidaamkayaga maareynta tayada kaas oo hubinaya oo lagu gaarayo soo -saarka iyo siinta macaamiisheenna alaab aan cillad lahayn iyo heerka adeegga khaladka ah.
Laga soo bilaabo dhaafitaanka filashooyinkaaga si aan si joogto ah u hagaajino wax kasta oo aan sameyno, waxaan halkaan u joognaa inaan gaarno guushayada annagoo kaa caawineyna inaad adigu gaarto.